Malunga nathi - Jiangyin Puyang Heavy Industry Co., Ltd.
Ukwaziswa kwemveliso yenkampani
Jiangyin Puyang Heavy Industry Co., Ltd. yinkampani ekhethekileyo insimbi esisangqa intsimbi, ingxubevange sentsimbi kunye aluminiyam esisangqa e China, Iimveliso ziveliswa ngokwezo migangatho, ezifana JIS, Din, ANSI, BS, GB, SH njalo njalo. Sinokuvelisa i-flange engaqhelekanga ngokomzobo wabathengi kunye neesampuli. Iiflanges zethu ezintsha zealuminium ziyasebenzisana nalawo mashishini makhulu ekhaya kunye nokukhwela njengeGrid State, uHenan Pinggao Electric Co, Ltd, iXi'an High Voltage Apparatus Co, Ltd, Shanghai Chint Electric Co, LTD, TOSHIBA, HYOSUNG, ABB Inc kunye nabanye.
Inkampani yethu yasekwa ngo-2006, sinamava amaninzi kushishino nasekuqiniseni, imveliso yonyaka ingaphezulu kweetoni ezingama-5000 ngonyaka. Siphumelele neseti yezixhobo eziphambili kubandakanya i-4T, 1.75T, 1T, 0.75T Air Hammer, ukufudumeza iziko, ubushushu unyango lomlilo, ukurhweba umatshini wokungenisa, umatshini wokubona, umatshini wokugrumba, umatshini wokuhlamba kunye nokumakisha .
Okwangoku, kukho abasebenzi abangama-130 ePuyang, kubandakanya iinjineli ezili-9, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kubathengi bethu.
Kwiminyaka yakutshanje, uPuyang wathumela iimveliso kumazwe amaninzi, njenge-United States, Canada, Spain, Brazil, Iran, Indonesia, South Korea, Italy, France, Germany, Singapore kunye ne-Australia, inkampani iseti uphando kunye nophuhliso olutsha, ukuqhubekeka ngomatshini ukupakisha njalo njalo kuthotho lobuchwephesha bemveliso, umgangatho wemveliso uphumelele imigangatho yasekhaya nakwamanye amazwe, kwaye wafumana isiqinisekiso somgangatho we-ISO9001-2008. Ukuqinisekiswa ngumzi mveliso weABS ngoJuni 2012, ngoJulayi 2014, waphumelela i-DNV, isatifikethi seGL.
I-Puyang ngamaxabiso afanelekileyo, imveliso efanelekileyo kunye nenkonzo elungileyo emva kokuthengisa njengomsebenzi wakho, sifuna ukusebenza nabathengi ngesiseko sokuxhamla kunye nokufuna uphuhliso olufanayo, abathengi abamkelekileyo kwihlabathi liphela qhagamshelana nathi.
Ukuqiniswa, unyango lobushushu emva kokukhokelwa njengenkqubo yokusebenza ephambili, unyango lobushushu emva kokwenza nokuhlola okungonakalisiyo kwinkqubo ekhethekileyo.